Ividiyo ye-amazon prime ngoku iyafumaneka kwi-android tv nakwi-chromecast
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Amazon Prime Video ngoku iyafumaneka kwi-Android TV nakwiChromecast
I-Amazon Prime Video ngoku iyafumaneka kwi-Android TV nakwiChromecast
IAmazon neGoogle bayingcwaba ihatchet kungekudala, iinkonzo zabo ezininzi ziye zaqala ukubonakala kwelinye iqonga. Ekuqaleni kwale veki, iAmazon kwaziswa ukuba usetyenziso olusemthethweni lweYouTube luya kufumaneka kwizixhobo zeTV yoMlilo, ngelixa uGoogle iqinisekisiwe I-Amazon Prime Video ngoku ikwi-Android TV kunye neChromecast.
Ukuqala namhlanje, iVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon iya kufikeleleka ngeChromecast kunye nezixhobo zeTV yeTV. UGoogle ubhengeze ukuba iChromecast kunye neChromecast eyakhelwe-ngaphakathi yabasebenzisi iya kuba nokufikelela ngaphezulu kwe-2,000 zokusebenza kwaye baya kuba nakho ukwenza umxholo ngokuthe ngqo kwiAmazon Prime Video app kwiTV yabo.
Izinto ekuphela kwazo ezifunekayo zezakutshanje Ividiyo enkulu yeAmazon app kunye ne-Android 5.0 okanye ngaphezulu okanye i-iOS 10.1 okanye entsha kwifowuni okanye kwithebhulethi ukufumana uhlaziyo. Abasebenzisi beChromecast Ultra, kwelinye icala, baya kufumana ukufikelela kwi-4,000 izihloko ezifakwe kwi-Prime ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo.
Okokugqibela, inkampani yokujonga intaba iqinisekisile ukuba ngaphandle kokukhetha izixhobo ze-TV ye-Android okwangoku eneVidiyo yeNkulumbuso, iiTV zeTV ezikrelekrele ze-Android, iibhokisi ezisetiweyo kunye nezixhobo zokusasaza kungekudala ziya kufumana usetyenziso njengoko sele uqalile ukukhutshwa.
Gcina ukhumbula ukuba iapp entsha yeAmazon Prime yeVidiyo iyafumaneka ukuze ikhutshelwe Ivenkile yeGoogle Play , kodwa ukuba i icon iyabonakala kwi-TV yakho ye-Android, unokucofa kuyo ukuqala ukukhuphela.
isamsung galaxy note 5 nougat
Insiza entsha ivumela iApple kunye neMossage ukuba isebenze kwifowuni ye-Android
Fumana i-iPhone 8 entsha kraca ngexabiso le- $ 500 kunye ne- $ 600 ye-iPhone 8 Plus kwiCostco
I-Apple iya kuthi inamathele kwizinto ezilula zebhetri zokugcina i-iPhone 13 indleko zijongiwe
I-AT & T yazisa ngeNzuzo yeSabelo esiShukumayo; Isicwangciso esitsha sokwenza amatyala nge-21 ka-Agasti kunye nokususa ukugqitha